Charmy Studio entliziyweni kaBrno - I-Airbnb
Charmy Studio entliziyweni kaBrno
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguMartin Filip
UMartin Filip yi-Superhost
Isitudiyo seCharmy sithetha into efanayo neendwendwe kwiziko lembali ledolophu yaseMoravian. Ngenxa yendawo ekuyo, yindawo ecwangcisiweyo yokuhlala ishishini, uhambo lweshishini kodwa ikwayindawo yoxolo yokuphumla kwezothando. Kwindawo ekufutshane ujikelezwe yinkcubeko kunye neenkonzo. Ukuhamba 2min. ukuya kwiMarike yeKhaphetshu, 3min. kwi Náměstí Svobody, 5min. kwisikhululo sikaloliwe esikhulu, isikhululo sebhasi kwi-Grand Hotel, ukuthuthwa kwezikhululo zeenqwelomoya zaseBrno naseVienna, izikhululo zokudlulisa izithuthi zikawonke-wonke. Ukwaneliseka kweendwendwe ngundoqo.
Indlu ekhethekileyo, epholileyo kunye nengenazithintelo emva kokwakhiwa kwakhona ibekwe kwintendelezo. Ngenxa yokufumaneka kwayo, ifanelekile ngakumbi ukuhlala okufutshane. Izixhobo zangaphakathi ezisebenzayo zongeza imvakalelo yoxolo kunye nobumfihlo.
Igumbi lokuhlambela linesitayile kwaye lixhotyiswe ngokupheleleyo.
Ikhitshi livumela ukutya okulula.
Ibhedi ixhotyiswe nge-grate enomgangatho ophezulu kunye ne-mattress yonyango (inzima).
Yonke indawo yefulethi ihlala ibulawa iintsholongwane kwaye igcinwe icocekile ngokusisigxina. Izilwanyana zasekhaya zamkelekile apha. Isantya seWiFi yinto eqinisekileyo.
Kwimeko yesicelo esikhethekileyo sondwendwe, sizama ukuhlangabezana nesicelo.
Indlu ekhethekileyo, epholileyo kunye nengenazithintelo emva kokwakhiwa kwakhona ibekwe kwintendelezo. Ngenxa yokufumaneka kwayo, ifanelekile ngakumbi ukuhlala okufutshane. Izixhobo zangaphakathi ezisebenzayo zongeza imvakalelo yoxolo kunye nobumfihlo. Igumbi lokuhlambela linesitayile kwaye lixhotyiswe ngokupheleleyo. Ikhitshi livumela ukutya okulula. Ibhedi ixhotyiswe nge-grate enomgangatho ophezulu kunye ne-mattress yonyango (inzima). Yonke indawo yefulethi ihlala ibulawa iintsholongwane kwaye igcinwe icocekile ngokusisigxina. Izilwanyana zasekhaya zamkelekile apha. Isantya seWiFi yinto eqinisekileyo. Kwimeko yesicelo esikhethekileyo sondwendwe, sizama ukwanelisa isicelo.
Umbuki zindwendwe ngu- Martin Filip
Ndinika iindwendwe indawo, kodwa ndiyafumaneka xa kufuneka.
Unxibelelwano kunye nolwazi sisiseko sesiqalo esihle. Sifumaneka ngokupheleleyo kwiindwendwe kwaye sinokuqhagamshelana nathi ngemibuzo, iingcebiso okanye iingcebiso ngayo nantoni na ngo-Airbnb, ngefowuni nange-imeyile.
Kwimeko kaxakeka sifumaneka iiyure ezingama-24.
Unxibelelwano kunye nolwazi sisiseko sesiqalo esihle. Sifumaneka ngokupheleleyo kwiindwendwe kwaye sinokuqhagamshel…
Iilwimi: বাংলা, Čeština, English, Русский